Warar iskhilfaasan oo ka soo baxaya weerarkii rasaasta & isqarxinta ee Muqdisho – SBC
Warar iskhilfaasan oo ka soo baxaya weerarkii rasaasta & isqarxinta ee Muqdisho
Posted by editor on Aktoober 29, 2011 Comments
Warar iska soo horjeeda ayaa ka soo baxaya qarax & israsaaseyn ba’an oo ka dhacay saldhig ay ciidamada AMISOM oo ay wehliyaan kuwa DKMG Soomaaliya ku leeyihiin wadada warshadaha gaar ahaan xero Jarmal, kaasi oo saaka ay geysteen xarakada Shabaabka.
Weerarkan oo saaka dhacay ayaa ilo wareed oo madaxbanaan waxay xaqiijiyaan in uu geystey khasaare dhimasho & dhaawac isagu jira oo soo gaarey ciidamadii saldhigaasi ku sugnaa iyo waliba ragii weerarkaasi geystey oo laba ka mid ah la xaqiijiyey inay qarxiyeen.
Qof goob jooge ahaa oo ka gaabsadey in magaciisa la sheego sababo xasaasiyada warkani uu leeyahay ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 12 askari oo isagu jira kuwa AMISOM & dawlada KMG Soomaaliya
Weerarkan ayaa la sheegay in xubno ka tirsan Shabaabka oo ku hubaysaa qoryaha garabka laga rido ee AK 47, bambooyin iyo kuwa isku soo xiray suuman ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa ay weerer ku ekeeyeen saldhigaasi oo ku dhaw garoonka Stadium.
Goob joogahuhu waxaa kale oo uu sheegay in weerarkaasi ay sidoo kale ku dhinteen lix ka mid ah kooxdii weerarka soo qaadey ee Shabaabka ka tirsaneyd, iyadoo laba ka mid yihiin kuwii isqarxiyey.
War ka soo baxay xoogaga Shabaabku ay ku sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen tobanaan ka mid ah ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Ugandha iyadoo warsaxaafadeed afka Ingiriis ku qornaa oo lagu soo bandhigay mid ka mid ah shabakadaha Internet-ka ee ku hadla Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in 80 askari ay ku dhinteen weerarkaasi isqarxinta ah oo ay fuliyeen cutubyo ka tirsan Shabaabka.
Laakiin afhayeenka ciidamada AMISOM ayaa hadal kaasi ka duwan soo saarey waxaana uu sheegay in ay weerarkaasi fashiliyeen isla markaana dhankooda 10 askari kaga dhaawacmeen, iyadoo qaarkood dhaawacoodu halis yahay.
“Waxaynu hada wadnaa waa inaan nafteena difaacnaa, wax la yaab ah ma ahan, maalin kasta waa dhimasho & dagaal” ayuu yiri afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali dheere).